'Boiiing', iyo nyowani shambadziro yeApple's iPad Mhepo | IPhone nhau
'Boiiing', chiziviso chitsva cheApple's iPad Air 2020
Musi waSeptember 15, Apple yakatiunza tese pamwechete kuti tipe iyo nyowani Nhepfenyuro dzeApple 6 uye SE, iyo nyowani iPad uye iPad Mhepo uye, pakupedzisira, iyo bundle yemasevhisi anonzi Apple One. Izvo hazvina kusvika mazuva mashoma apfuura apuro hombe rakafunga kuburitsa iyo nyowani iPad Mhepo kuti ichengete pawebhusaiti yepamutemo, mwedzi mushure mekuratidzwa kwayo kwepamutemo. Ino ndiyo nguva yekusimudzira chigadzirwa kuti chiwedzere kutengesa, kusvina zvese zvinobatsira. Saka tinogona kuzviona mumushambadziro mutsva unonzi 'Boiiing' kwatinoona apedza akasiyana eiyi nyowani iPad Mhepo 2020 (kana yechina chizvarwa) nenhumbi dzayo.
iPad Mhepo 2020, Apple Penzura, Mashiripiti Khibhodi ... uye yakawanda ye 'Boiiing'
Kuzivisa iPad Mhepo. Inoratidzira yakazara-skrini dhizaini uye 10,9 ”Liquid Retina kuratidza. Iine Ultra-inokurumidza A14 Bionic chip, iyo inoita iyo iPad Mhepo inomhanya kupfuura mazhinji malaptop. Iyo ine Kubata ID yakavakirwa mubhatani remagetsi. Inoshanda zvakakwana neMicrosoft Keyboard uye Apple Penzura (inotengeswa zvakasiyana). Uye inouya nemavara mashanu akanaka.
Iyo iPad Mhepo 2020 kana yechina chizvarwa inomira kunze kwesimba rayo rese rakavanzwa mune nyowani A4 Bionic chip. Chii chimwe, dhizaini yayo iri kuwedzera kufanana nehama yayo iyo iPad Pro. Iwo mabhezeri akaderedzwa kuti ape mamwe skrini neiyo saizi yedhizaizi ... uye zvave kukwanisika. Uye zvakare, iyo Touch ID sensor yakaverengerwa mubhatani rekuvharira, basa rakashamisa pakuratidzwa kwechigadzirwa munaGunyana apfuura.
Iyo iPad Air 2020 inogona kutengwa kwemazuva mashoma pawebhusaiti yepamutemo yeApple, vagoveri uye neApple Stores. Kupedza kwayo kwakasiyana: nzvimbo grey, sirivheri, rose goridhe, girini uye denga rebhuruu. Aya ekupedzisa ndeaya anosimudzirwa mune shambadziro nyowani inonzi 'Boiiing' naApple. Mukushambadzira tinogona zvakare kuona zvimwe zvishongedzo senge Apple Penzura kana iyo yeMagetsi Keybord, shamwari dzisingaparadzanisike dzeiyo iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Air » 'Boiiing', chiziviso chitsva cheApple's iPad Air 2020
Apple TV + inogona kuitwa ne 'Hapana nguva yekufa', iyo itsva James Bond bhaisikopo
Maitiro ekugadzirisa matambudziko ekutsausa paAirPods uye AirPods Pro